अमेरिकामा नेपालीलाई सजिलो छैन,डिप्रेसनको शिकार हुनुपर्ला - Himalayan Kangaroo
अमेरिकामा नेपालीलाई सजिलो छैन,डिप्रेसनको शिकार हुनुपर्ला
Posted by Himalayan Kangaroo | ३० पुष २०७४, आईतवार १०:३६ |
अमेरिका आउने सबै नेपाली चाहे डिभी परेर आएका किन नहुन् उनीहरुले सुरुमा काम गर्ने भनेको प्रायः भारतीय वा पाकिस्तानी रेस्टुरेन्टमा हो। भाग्यले साथ दिए कसैले ग्याँस स्टेसन त कसैले स्टोरमा काम पाउलान्। तर त्यसमा काम गर्न कम्तिमा एक महिना सित्तैमा काम गरिदिनुपर्छ तालिमका नाममा। एक महिना सित्तैमा कसरी काम गर्नु ? त्यसैले अमेरिकामा होटलमा काम गर्ने भनेर कसैले गफ दिएपनि यथार्थमा उनीहरुले भारतीय वा पाकिस्तानीकै रेस्टुरामा काम गरिरहेका हुन्छन्।
अमेरिकामा आएपछि अधिकांश नेपालीले गर्ने भनेको शरणार्थी (एसाइलम) आवेदननै हो। थोरैलेमात्र ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ प्रकृया गर्ने हुन्। एक्स्ट्रा अर्डिनरीका लागि समाजमा चिनिएको, कुनै क्षेत्रमा ख्याती कमाएको हुनुपर्छ। जुन सबैमा लागू हुन सक्दैन ।
अर्को कुरा अधिकांश नेपालीसँग अमेरिकाको लागि चाहिने कुनै पनि सीप र क्षमता समेत हुँदैन। प्राविधिक रुपमा कुनै सीप हुने हो भने यहाँ मध्यमस्तरको जीवन विताउन गाह्रो छैन। कपाल काट्नेमात्र सीप कोहीसँग छ भने त्यसले राम्रैसँग आफ्नो परिवार पाल्नसक्छ, दुईचार जनालाई रोजगारी दिनसक्छ।
तर सीप सिकेर आउनुभन्दा हजारौं नेपाली दलाललाई २५ देखि ३५ लाख रुपैयाँ बुझाएर यहाँ छिर्छन ज्यान जोखिममा पारेर। कोही विद्यार्थी भएर आउँछन् र कलेजै नटेकी काम खोज्न थाल्छन्। उनीहरु कुनै शीप सिक्दैनन्। अनि यहाँ आएपछि उही रेस्टुरेन्टमा जुठा भाँडा उठाउनेभन्दा अरु काम केही मिल्दैन। कतिले त महिनौसम्म पनि त्यही काम पनि पाउँदैनन्। दलाललाई तिरेको रकमको व्याजले आकाश छोइसकेको हुन्छ। परिवारले फोन गरेर साहुको धम्की सुनाउँछन्। अनि अमेरिकामा आइपुगेपछि पनि एकातिर काम मिल्दैन। अर्कातिर मिलिहाले पनि २५–३० लाख रुपैयाँ अनि त्यसको व्याज कहिले चुक्ता गरिसक्नु ?
भुक्तभोगीहरु भन्छन्–दलाललाई मोटो रकम बुझाएर यो सपनाको दलदलमा आउँदै नआउनुस्। यहाँ बस्नेले समुद्री किनार, स्ट्याचु अफ लिवर्टी, टाइम्स स्क्वायर, गोल्डेनगेट, हलिउडमा बसेर खिचेको फोटोलाई देखेर मूल्यांकन नगर्नुहोला। किनकी हामीजस्ता सीप, दक्षता अनि अंग्रेजी भाषामा कमाण्ड नभएकालाई यो संसार निकै कठिन ठाउँ हो, स्वर्ग होइन नर्क हो शीप र भाषा नहुनेका लागि। यहाँ आएर डिप्रेसनमा परेर आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा अघि एक पटक अमेरिका पुगे भने मैले काम पाउनसक्छु ? काम पाइन भनेपनि कति महिना खाली हात बस्नसक्छु ? त्यति समयसम्मका लागि मलाई सहयोग गर्ने आफन्त, साथीभाइ छन् कि छैनन्अ ? नि जस्तोसुकै काम पनि गर्छु भन्ने आाट हिम्मत भए मात्र अर्को गोलार्द्धको यो संसारमा टिक्न सकिन्छ। किनकी यो ठाउँ भनेको कसैले कसैलाई मतलब नराख्ने, अनि परिआउँदा आफन्तले समेत मुन्टो बटार्ने, चिनेको छैन भन्ने ठाउँ हो।
ट्वालेट सोर्छु, लगातार ८ घण्टासम्म लगातार उभिएरै काम गर्न सक्छु भन्ने आँट छ, हातमा कुनै सीप छ भने यो संसारमा टिकिन्छ। डिप्रेसनको शिकार हुनुपर्दैन। नत्र यो ठाउँ कहिल्यै पुरा नहुने सपनाको संसारमात्र होइन लड्डुपनि हो। जसरी लड्डु खानेपनि पछुताउँछ, खान नपाउने पनि पछुताउँछ। अमेरिका पनि यस्तै हो। जहाँ आइसकेका पनि पछुताएका छन् र आउन नपाएका पनि पछुताइरहेका छन्।
अमेरिका जसरी पनि आउने भूत चढेको छ कसैलाई भने कुनै न कुनै सीप सिकेर आउनुस। बरु कपालै काट्ने सीप भएपनि आफूसँग बोकेर आउनुभयो भने तपाईलाई यहाँ बाँच्न कुनै गाह्रो छैन। हातमा सीप नभएका, भाषामा कमाण्डिङ नभएकाहरुले काम गर्ने भनेको रेस्टुरेन्ट, कुनै स्टोर या ग्याँस स्टेशनमा मात्र हो। भाग्यले साथ दिइहाल्यो भने कुनै कम्पनीमा छिर्न पनि सकिन्छ। तर त्यो भनेको धेरैपछिको कुरा हुन्छ।
Previousउत्तम अधिकारीको संयोजकत्वमा ओएनएफ भिक्टोरिया सम्मेलन आयोजक समिति गठन
Nextअष्ट्रेलियामा देउडा नाच नाच्दै मनाए सुदुरपश्चिमेलीले माघे संक्रान्ति